အလုပ်လုပ်နေရရင် ပျော်နေတဲ့ နေခြည်ဦး
အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်နေရရင် ပျော်နေတတ်သူ နေခြည်ဦး က သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုတောင် ဂရုစိုက်ဖိ့ု မအားလပ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့. ဒါကြောင့်လည်း အလုပ်ကို လောဘမကြီးတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်
နေခြည်ဦးဟာ Beauty Blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့သာမက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ သူမက အရင်တုန်းကထက် အလုပ်တွေ ပိုလုပ်နေရလို့လည်း ပျော်ရွှင်နေမိပါတယ်လို့ မီဒီယာတွေ ကနေတဆင့် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
''အလုပ်ကိုလေ နေခြည်က ပိုက်ဆံရတာထက် အလုပ်လုပ်ရတာကို အရမ်းရူးသွပ်တယ်။ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ဝင်နေသလဲ ဆိုတာလည်း နေခြည်မသိဘူး.နေခြည့် မန်နေဂျာတွေကို မေးမှသိမှာ အလုပ်လုပ်ရတာကိုပျော်တယ်။ တစ်ခါမှလေ ကိုယ့်ဘဝမှာ အဲ့ဒီလောက်အထိ အလုပ်တွေ အများကြီးမလုပ်ခဲ့ရဖူးဘူး။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိဘကျွေးတာ စားခဲ့ရတာလေ။ အခုကျတော့ အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ရတော့ အိပ်ချိန်တောင် ၄ နာရီပဲ ရှိတယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်လာတာပေါ့'' လို့ ဆိုပါတယ်။
နေခြည်ဦးဟာ မကြာသေးခင်က နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ရှုတင်ကိုတော့ နားလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို သင်ခန်းစာယူပြီး အလုပ်ထက် ကျန်းမာရေးကိုပို ဂရုစိုက်မယ်လို့လည်း ကိုယ်စောင့်နတ် ရုပ်ရှင်ကား အထူးပွဲနေ့က ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
'' နောက်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးလည်း ပိုပြီးတော့ ဂရုစိုက်ရမယ်။ ပြီးတော့ လူက လေ့ကျင့်ခန်းလည်း မလုပ်တော့ ဝလာတယ် အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ နောက်ပိုင်းဆိုရင် ကျန်းမာရေးလည်း ပိုဂရုစိုက်ရမယ်။ နေခြည်လုပ်နိုင်မှာပါ။ နေခြည်ရှေ့ဆက်ပြီး တော့လည်း အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ရဦးမယ်. အလုပ်တွေလည်း လောဘမကြီးတော့ဘူး ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ရမယ်'' လို့ သူကဆိုပါတယ်။
နေခြည်ဦးကိုတော့ ပရိသတ်တွေက Beauty Blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Beauty Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အတွက်လည်း ၈ တန်း၊ ၉ တန်းအရွယ်ကတည်းက လေ့လာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဆက်လက်ပြောပြလာပါတယ်။
'' နေခြည်က Beauty Blogger ဆိုတာကို ငယ်ငယ်က မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့လည်း မစဉ်းစားဘူး ဒါပေမယ့် ၈ တန်း၊ ၉ တန်းလောက်မှာကျတော့ You Tube တွေ ကြည့်တယ်။ သူတို့ရဲ့ Life Style တွေကိုကြည့်ပြီး အရမ်းဝါသနာပါလာတယ်။ ကိုယ်က အခြေခံ အတွေ့အကြုံရှိထားတော့ ကိုယ်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ အခါကျမှ အဲ့ဒါတွေ အကုန်လုံးကို ချပြမယ် ဆိုတာချည်းပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျတော့ ဒီလောက်ကြီး ပွင့်လင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဆိုပြီးတော့ အစပိုင်းမှာ လူပိုသိလာစေတယ်. ဒီလိုပဲ လူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ နေခြည် ဒီတစ်နေရာ ကိုရောက်လာ တယ် ထင်ပါတယ်''လို့ ဆိုပါတယ်။
နေခြည်ဦးကို ပရိသတ်တွေက Beauty Blogger တစ်ဦးအနေနဲ့ စတင်အားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့ Beauty Blogger တင်မက အနုပညာ အလုပ်တွေ လည်း ဆောင်ရွက်လို့နေပါပြီ။ သူပါဝင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာ းကြီးတွေကလည်း ပရိသတ်အရှေ့ကို မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။